Global Voices teny Malagasy » Potehin’ny Polisy ao Bangladesh Ny Voankazo Manga Vokatra Fa Misy Formaldehyde · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2014 15:42 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Toekarena sy Fandraharahàna, Voina, Zon'olombelona
Vanim-potoana mahafinaritra ny vanim-potoana manorana sy mandrivotra (Mousson)  ao Bangladesh rehefa heniky ny voankazon'ilay vanim-potoana ny tsena. Letisia mena, ampalibe maitso ary voatavo mavo eny ambony talantalana miloko isan-karazany, na mivangongo ao anaty harona sy eny ambony latabatra.
Tadiavina manokana ny manga mamy sy be nofony, saingy sarotra ny nitady azy tamin'ity taona ity noho ny fidinan'ny polisy  hisava ny fampiasana tsy amin'antony ny formol, raiki-pohy matanjaka avy amin'ny formaldehyde  ampiasaina hitehirizana vokatra (fantatra amin'ny fampiasana azy hitehirizana faty). Tamin'ny volana lasa teo, nanangana  vondrona afa-mihetsika haingana hitsapa ny tahan'ny formol ny polisy, nandraoka sy namotika entana vokatra eto an-toerana sy nohafarana avy any ivelany efa voafatratra.
Ara-boajanahary ny voankazo dia miaty formol 0.03-0.15 part per million (ppm), saingy niditra an-tsehatra miady amin'ny (fampiasana) formol ny polisy, izay mikendry voalohany indrindra ireo voankazon'ny vanim-potoana , izay nahita tahan'ny formol anelanelan'ny 3.5 ppm ka hatramin'ny 46 ppm  amin'ny voankazo hita ao an-tsenan'ny renivohitry ny firenena ao Dhaka. Teo ny polisy dia nametraka toeram-pisavana teny amin'ny toerana miditra ny tanàna mitady voankazo efa betsaka formol.
Poizina mahery ny Formaldehyde. Mahafaty olona ny fampidirana 30 mL  monja amin'ny taharo miaty formaldehyde 37 isanjato. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay tao Bangladesh, dia nampiasaina tsy misy fatrany tamin'ny hani-maitso, voankazo, hena ary ireo zavatra mety mora lò ny formol. Tamin'ny 30 Jona 2014, nandany  ny volavolan-dalàna mametraka ny sazy fanagadrana ela indrindra sy onitra mavesatra dia mavesatra noho ny fampiasana tafahoatra ny formol sy varotra tsy ara-dalàna ny filankevitry ny minisitra ao amin'ny firenena.
Mpanoratra gazety sady blaogera Anis Raihan  ao amin'ny blaogy Istishon mitantara ny fomba ikarakarana ny manga amin'ny alalan'ny formol:
Tsy faly amin'ny fahaverezan'ny vokatra ny mpivaro-boankazo. Ao amin'ny seranan'ny tanànan'i Chittagong, nitokona nandritra ny ora maromaro  ny mpivarotra voankazo, milaza fa manorisory loatra azy ireo amin'ny fitsapana ny voankazo amin'ny milina tsy mifanaraka amin'izany  ny polisy.
Raharaha manahirana any Bangladesh ny sakafo voapoizina . Tamin'ny 2012, niteraka fitroarana manerana ny firenena ny fahafatesan’ankizy 14 tao Dinajpur  rehefa nihinana letisia miaty famonoam-boalavo.
Nisy fanadihadiana vao haingana  nataon'ny governemantan'i Bangladesh miaraka amin'ny FAO avy ao amin'ny Firenena Mikambana nampiseho fa mihoatra ny 40 isanjaton'ny sakafo ao Bangladesh no miaty famonoam-boalavo voarara. Ny taharom-poizina ao amin'ny sakafo notsongaina dia in-telo ka hatramin'ny in-20 avo heny amin'ny fetra natsangan'ny Vondrona Eoropeana. Ao amin'io tatitra io ihany, 50 isanjato amin'ny hani-maitso sy 35 isanjaton'ny voankazo no nambara fa tsy mahasalama. Ny manga sy ny patsabe mbola lena notsongaina no nahitana tahana formol avo indrindra.
Nisy vondrona mpikatroka iray nandamina hetsi-panoherana iray antsoina hoe  “Atsaharo ny fanapoizinana anay” tamin'ny volana mey teo ary nandrisika ny governemanta handray fepetra mifanaraka amin'izany. Dokotera iray, Dr. Shafiq, namoaka hevitra tao amin'ny Facebook  fa tokony hisy lalàna henjana kokoa entina miady amin'ny fampiasana formol.
Blaogera Kobid  nizara antotanisa mampitsangam-bolo mifandraika amin'ny sakafo voipoizina ao Bangladesh:
Manakaiky ny 5,7 tapitrisa isan-taona ny olona marefo ara-pahasalamana noho ny sakafo tsy ara-boajanahary. Araka ny tarehimarika avy ao amin'ny Biraon'ny Antotanisa Bangladesh , manakaiky ny 40 isanjaton'ny fahafatesana tamin'ny 2010 dia vokatry ny aretina avy amin'ny sakafo tsy ara-boanajahary intsony na mivantana na ankolaka.
Tsy nifidy teny namatrapatraka ny blaogera Shahadat , tamin'ny filazana ireo olona mivarotra sakafo voapoizina misy fanafody tsy mahasalama:
Fa mbola sarotra kokoa noho izany ny adihevitra. Araka ny navoitran'ny mpanoratra sady mpanao matoandahatsoratra Tahmina Anam  ao amin'ny The New York Times, ny any ambanivohitra mahantra no mamokatra ny voankazo, izay amidy any amin'ny faritra an-drenivohitra. Lafo ny fitaterana ho an'ny mpamokatra kely ary saropady noho ny tsy fisian'ny fiara sahaza ametrahana ny vokatra sy ny fanemoram-potoana eny an-dalana vokatry ny fitohanan'ny fiara, fitokonana ary ny faharatsian'ny lalana. Ny formol no antoka ho azy ireo fa tsy ho very ny vokatra avy amin'izy ireo, fa ny tambin'izany kosa dia ny fahasalamam-bahoaka
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/19/62105/
 vanim-potoana manorana sy mandrivotra (Mousson): http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_calendar
 fidinan'ny polisy: http://www.hngn.com/articles/33302/20140609/deadly-formalin-laced-fruits-bangladesh-cause-slow-poison-mass-killing.htm
 mikendry voalohany indrindra ireo voankazon'ny vanim-potoana: http://www.banglanews24.com/beta/fullnews/bn/298191.html
 anelanelan'ny 3.5 ppm ka hatramin'ny 46 ppm: http://www.ndtv.com/article/world/alert-in-bangladesh-over-deadly-formalin-laced-fruits-538606
 fampidirana 30 mL: http://www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp?id=216&tid=39
 nitokona nandritra ny ora maromaro: http://observerbd.com/details.php?id=28212
 milina tsy mifanaraka amin'izany: http://www.theindependentbd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=221654:formalin-testing-kit-is-it&catid=129:frontpage&Itemid=121
 sakafo voapoizina: http://www.allbanglanewspaper.com/formalin-is-available-in-dhakas-market.html
 ankizy 14 tao Dinajpur: http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=240106
 fanadihadiana vao haingana: http://www.thedailystar.net/40pc-food-poisonous-21921
 nandamina hetsi-panoherana iray antsoina hoe: http://shobujpata.com/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95.sp
 namoaka hevitra tao amin'ny Facebook: https://bn-in.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304540856372064&id=146322485527236
 Blaogera Kobid: http://www.somewhereinblog.net/blog/kobid/29832658
 tarehimarika avy ao amin'ny Biraon'ny Antotanisa Bangladesh: http://203.112.218.66/WebTestApplication/userfiles/Image/SY2010/Chapter-13.pdf